विश्वकप छनौटमा नेपालको अष्ट्रेलियासँग ५-० को हार
काठमाडौं- विश्व कप छनोटअन्तर्गत नेपाल र अष्ट्रेलियाबीचको खेलमा नेपालाई फराकिलो अन्तरको हार हात लागेको छ। अष्ट्रेलियाको क्यानबेरामा जारी विश्व कप छनोट खेलमा घरेलु टोलीसँग नेपाल ५-० ले पछि परेको हो। अस्ट्रेलियाका जिमि म्याकलेमले ह्याट्रिक र ह्यारी सौटरले समान दुई-दुई गोल गरेका छन्। नेपाली टिमले निरन्तर दवाबका खेप्दै पाँच सुन्यमा चित्त बुझाएको छ। खेलको छैटौं मिनेटमै गोल […]
साफ यू-१५ फुटबल च्याम्पियनमा नेपाल र भारत भिड्दै
भुटानको चाम्लिङथाङ रंगशालामा हुने खेल स्थानीय समय अनुसार दिउँसो ३ बजेबाट हुनेछ ।
नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध नेपालको प्रदर्शन कस्तो रहला ?
काठमाडौं– ओमानमा जारी पाँच देशको टी २० क्रिकेट सिरिजको दोस्रो खेलमा नेपालले आज बलियो टिम नेदरल्याण्ड्सको सामना गर्दैछ । ओमान क्रिकेट एसोसियसनको टर्फ मैदानमा हुने खेल नेपाली समय अनुसार बिहान सवा ११ बजेबाट सुरु हुनेछ । पहिलो खेलमा हङकङविरुद्ध ४ विकेटको जीत निकालेको नेपालले दोस्रो खेलमा पनि जीत हासिल गर्ने लक्ष्यकासाथ मैदानमा उत्रिँदैछ । जारी […]
सोमवार, अशोज २०, २०७६
हङकङविरुद्ध नेपालको प्रदर्शन कस्तो रहला ?
काठमाडौं- पाँच राष्ट्रबीचको टी–ट्वान्टी क्रिकेट सिरिज अन्तर्गत नेपालले आज (आइतबार) पहिलो खेल खेल्दैछ । ओमानकाे अल अम्रेट क्रिकेट मैदानमा हुने खेल नेपाली समय अनुसार दिउँसो पौने ३ बजेबाट शुरु हुने५ । हङकङको सामना गर्दै नेपालले सिरिजको शुरुवात गर्न लागेको हो । हङकङविरुद्ध मैदान उत्रिँदा नेपाल सुखद शुरुवात गर्ने लक्ष्यमा हुनेछ । हङकङ पनि पहिलो जितको […]
नेपाल सम्मिलित पाँच राष्ट्रबीचको टी–ट्वान्टी क्रिकेट सिरिज ओमानमा सुरु हुदै‌
एजेन्सी । नेपाल सम्मिलित पाँच राष्ट्रबीचको टी–ट्वान्टी क्रिकेट सिरिज आजबाट ओमानमा सुरु हुदैछ । नेपालले विश्वकप छनौटको तयारीमा रहेका चार राष्ट्रसंग सिरिज खेल्न लागेको हो । सिंगापुरमा त्रिकोणात्मक टी–ट्वान्टी सिरिज खेलेर नेपाली टिम ओमान पुगेको हो । नेपालले ओमानमा शुक्रबार सिरिजको अन्तिम तयारी स्वरूप अभ्यास गरेको थियो । ओमान क्रिकेटले आयोजना गरेको सिरिजमा नेपाल, आयोजक […]
चौथो पटक लिगलिगे दौड जिते पनि अनिष राजा भएनन्
दशौँ लिगलिगे दौड प्रतियोगिता ‘२०७६’ को उपाधि जित्दै पर्वतका अनिष थापामगरले श्रीपेच पहिरिएका छन्। गोरखाको पालुङटारमा आज भएको प्रतियोगितामा निर्धारित १३.८ किलोमिटर दूरी ५७ मिनेट ५५ सेकेण्डमा पूरा गर्दै थापामगरले चौथो पटक सो उपाधि जित्न सफल भएका हुन्। भारतीय सेनामा कार्यरत थापामगर उपाधि जितेसँगै एक दिनका लागि लिगलिगे राजासमेत घोषित भएका हुन्। प्रथम भएका थापामगरलाई […]
सैनामैनामा कभर्डहल निर्माण
रुपन्देही–रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा रु एक करोड एक लाख ६० हजारको लागतमा ब्याडमिन्टन कभर्डहल निर्माण गरिएको छ । नगरपालिकाको रु ७६ लाख ६० हजार, जिल्ला समन्वय समितिको रु १० लाख, खेलकूद विकास समितिको रु १० लाख र सैनामैना ब्याडमिन्टन क्लबले रु पाँच लाख लगानी गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । विसं २०७२ देखि पर्राेहा ब्याडमिन्टन क्लबले कभर्डहल […]
साफ अन्डर–१८ को उपाधि भारतलाइ
काठमाडौं । नेपालमा सम्पन्न साफ अन्डर–१८ को उपाधि भारतले जितेको छ । काठमाडौंको हलचोकस्थित एपिएफ क्लबको मैदानमा आइतबार सम्पन्न फाइनल खेलमा भारतले बंगलादेशलाई २–१ ले पराजित गर्दै सो उपाधि हात पारेको हो । यस अघि सम्पन्न दुई संस्करणमा नेपालले उपाधि जितेको थियो । तेस्रो संस्करणको उपाधि जितेसँगै भारतले साफ अन्डर–१८ च्याम्पियनसिपमा उपाधि जित्ने नयाँ टोली […]
कप्तान पारसको कीर्तिमानी शतकसँगै सिंगापुर ९ विकेटले पराजित
काठमाडौं–कप्तान पारस खड्काको कीर्तिमानी शतकसँगै त्रिकोणात्मक टी ट्वान्टी सिरिजमा नेपालले सिंगापुरलाई हराएको छ । शनिबारको खेलमा सिंगापुर ९ विकेटले पराजित भएको छ । नेपालको जीतका लागि कप्तान पारसले कीतिमानी शतक प्रहार गरेका छन् । ओपनर इशान पाण्डे ५ रनमा आउट भएको खेलमा कप्तान पारस र आरिफ शेखले नेपालको ईनिङ्स उकासेका हुन् । टी–ट्वान्टी क्रिकेटमा नेपालका […]
क्रिकेट संघको अध्यक्षमा चतुरबहादुर चन्द विजयी
काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको अध्यक्षमा चतुरबहादुर चन्द विजयी भएका छन् । शनिवार सम्पन्न क्यानको निर्वाचनमा चन्दले ४४ मत पाउँदा अध्यक्षका अर्का उम्मेदवार विनयराज पाण्डेले १५ मत पाएका थिए । निर्वाचनमा ५९ मत खसेको थियो । सचिवमा अशोकनाथ प्याकुरेल विजयी भएका छन् भने कोषाध्यक्षमा रोशन बहादुर सिंह, राजुबाबु श्रेष्ठ विजयी भएका छन् । ५९ […]